Frank Lampard waa ninka dhexda uga ciyaara naadiga chelsea markaa sidaa daraadeed waxaan idiin sheegayaa inaan taagertaan ninkaa waayo waxaaa inii hadhay wakhti aad ku taagertaan
Frank James Lampard, OBE (wuxuu dhashay 20 Juun 1978) waa maamulaha kubbadda cagta Ingriiska, ciyaaryahankii hore ee xirfadlaha ahaa iyo qoraallada carruurta.  Waxa uu yahay maamulaha Derby County Derby County. Wuxuu ahaa gooldhaliyaha ugu sareeya gooldhalinta Chelsea, halkaas oo uu u ciyaaray 13 sanno, waxaana loo tixgeliyaa dhowr suxufi iyo khubaro kubadda cagta kubadda cagta si uu u noqdo mid ka mid ah ciyaartoyda khadka dhexe ee ugu weyn jiilkiisa,  [ 8] iyo sida ciyaartoyda Chelsea ugu weyn ee ay ka mid yihiin ciyaartoyda Chelsea.  
Lampard ayaa mustaqbalkiisii ​​ciyaareed ka bilaabay West Ham United, oo uu aabihiis Frank Lampard Sr uu ciyaaray. Waxa uu boos ka helay kooxda koowaad xilli ciyaareedkii 1997-98, sanadka soo socda wuxuu kooxda ka caawiyay inay kaalinta 5aad ku dhameysato Premier League, oo ah horyaalka ugu sareeya ee abid ugu goolasha badan Premier League. Sannadkii 2001, wuxuu u dhaqaaqay kooxdiisii ​​Chelsea London 11 milyan oo ginni. Sannadkii 2014, waxaa laga fasaxay Chelsea ka dib 13 xilli ciyaareed. Lampard ayaa ku biiray New York City heshiis labo sanno ah, isagoo u diyaar garoobaya kulankiisii ​​ugu horeeyay ee horyaalka Major League Soccer (MLS) ee sanadka 2015ka, laakiin wuxuu u ciyaari doonaa Manchester City inta lagu jiro. Si kastaba ha ahaatee, waxaa la soo wariyay in Lampard uu qandaraaska u saxiixay Manchester City, ma ahan New York City, sida lagu sheegay labada kooxood. Lampard ayaa kulankiisii ​​ugu horeysay u ciyaaray kooxda Chelsea isagoo 164 kulan oo isku xigta oo Premier League ah u saftay, waana rikoorka ciyaaryahan qadka dhexe ah. Wuxuu noqday naadiga ugu goolasha badan kooxda galbeedka London wuxuuna ahaa qeyb muhim ah oo ka mid ah kooxaha horyaalada Premier League ee 2004-05 iyo 2005-06 iyo koobab gudaha ah 2007dii. qandaraaskii uu kula jiray 2008, isagoo noqday ciyaaryahanka ugu mushaarka badan horyaalka Premier League xilligaas,  waxaana uu dhaliyay goolkiisii ​​ugu horeeyay ee Champions League sannadkii. Waxa uu ku guuleystay abaalmarin labaad oo abaalmarin ah oo FA Cup ah 2009kii, isagoo dhaliyay goolka guusha ee finalka. Xilli ciyaareedkii 2009-10, Chelsea ayaa ku guuleysatay horyaalkeedii koowaad iyo FA Cup, waxaana sidoo kale xilli ciyaareedkii ugu fiicnaa kooxda, isagoo dhaliyay 22 gool iyo 14 caawinaadood. Sanadkii 2012, Lampard ayaa Chelsea ku hogaamiyay guushoodii ugu horeysay ee UEFA Champions League, hal sano kadibna horyaalkoodii ugu horeeyay ee UEFA Europa League. Waxa uu sii daayay kooxda ka dib xilli ciyaareedka 2013-14.  
Lampard ayaa ah ciyaaryahanka ugu goolasha badan kooxda isagoo leh 211 gool tartamada oo dhan.  Lampard waa mid ka mid ah todobo ciyaaryahan, iyo ciyaaryahanka kaliya ee qadka dhexe ah, isagoo dhaliyay 150 gool ama ka badan Premier League. Waxa uu yahay kaalinta 4aad ee horyaalka Premier League oo dhan, iyadoo 102 caawineysa.   Sanadkii 2005, Lampard ayaa loo doortay Ciyaaryahanka Kubadda Cagta ee FWA, waxaana uu ku guuleystay abaalmarinta ciyaaryahanka sannadka adduunka ee FIFA iyo Ballon d'Or. Sannadkii 2010, wuxuu helay abaalmarinta FWA Tribute Awards. Waxa uu ku guuleystay 13 koob ee xirfadiisa ciyaareed.  Caalamka, Lampard ayaa 106 jeer England u saftay; wuxuu ciyaaray kulankiisii ​​ugu dambeeyey ee October 1999, wuxuuna ciyaaray seddex koob adduun
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Frank_Lampard&oldid=180137"
Last edited on 10 Sebteembar 2018, at 11:46
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 10 Sebteembar 2018, marka ee eheed 11:46.